Exchange ကိုလက်ရှိ Recovery mode မှာဖြစ်ပါတယ်
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ DataNumen Exchange Recovery Exchange ကိုလက်ရှိ Recovery mode မှာဖြစ်ပါတယ်
"Exchange သည်လက်ရှိတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်တွင်ရှိနေသည်" ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသတင်းစကား
မိုက်ကရိုဆော့ဖ် Outlook 2003 နှင့်ဗားရှင်းအသစ်များသည်ခေါ်ဆိုသည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် သိုလှောင်ထားသည့် Mode ကို၎င်းသည် Outlook အဟောင်းများအတွက်အော့ဖ်လိုင်းဖိုင်တွဲများ၏တိုးတက်လာသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။ သိုလှောင်ထားသည့် Mode ကို ထပ်တူပြုခြင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုထိရောက်စွာနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပေးသည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် Exchange Recovery Mode.
အခါ Exchange server, ဒေတာဘေ့စသို့မဟုတ်စာပို့ box ကို အော့ဖ်လိုင်းဖိုင်တွဲ (။ost) ဖိုင် ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်သို့မဟုတ် Exchange mailbox နှင့်၎င်းအကြားကိုက်ညီမှုမရှိပါ OST အကယ်၍ သင်သည် Outlook 2002 သို့မဟုတ်၎င်းထက်ပိုသောဗားရှင်းကိုသုံးနေလျှင်သို့မဟုတ် Outlook 2003 နှင့်အသစ်ထွက်သောဗားရှင်းများကို သုံး၍ ဖွင့်ထားသော်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုပါ သိုလှောင်ထားသည့် Mode ကို မသန်စွမ်းသူများနှင့်အွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ပါကထို့နောက် Outlook သည်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည် OST စာတိုက်ပုံးအသစ်အတွက်ဖိုင် အဟောင်း OST ဖိုင်ကိုဖျက်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းထဲရှိဒေတာကိုသင်ကြည့်ရှု။ မရပါ။ မူရင်းစာတိုက်ပုံးကိုထပ်မံရရှိနိုင်သည့်နောက်မှအဟောင်းတွင်ရှိသောဒေတာများကိုသင်ရရှိနိုင်သည် OST ဖိုင်အသစ်, ဒါပေမယ့်အသစ်သောသူတို့အား OST ဖိုင်ကိုနောက်တဖန်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ဒေတာကိုရယူရန်လိုအပ်ပါက OST ဖိုင်များ, သင်ကသူတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာဆီသို့ redirect လုပ်ဖို့ Outlook profiles ကို manually တည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်သည် OST အလွန်အဆင်မပြေသောဖိုင်များ။
သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် Outlook 2003 နှင့်နောက်ပိုင်းဗားရှင်းများကိုအသုံးပြုပါက၊ သိုလှောင်ထားသည့် Mode ကို ဖွင့်ထားသည်ဆိုလျှင်သင်၏ Exchange mailbox ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါကအောက်ပါသတိပေးစာကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Exchange သည် recovery mode တွင်ရှိနေသည်။ သင်၏ Exchange server ကိုကွန်ယက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ အော့ဖ်လိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဤလော့ဂ်အင်ကိုဖျက်နိုင်သည်။
အရာ Outlook နဲ့လဲလှယ်လက်ရှိ၌ရှိကြ၏ဖော်ပြသည် Exchange Recovery Mode.
ဘယ်အချိန်မှာအတွက် Exchange Recovery Mode၊ သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။
အော့ဖ်လိုင်းစနစ်။ သငျသညျကို select ပါလျှင် လုပ်ငန်းခွင်ကိုအော့ဖ်လိုင်းသင်၏အချက်အလက်ဟောင်းကိုရယူနိုင်သည် OST ဖိုင်ဆာဗာသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အဟောင်း OST ဖိုင်ကို offline mode ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
အွန်လိုင်းမုဒ်။ သငျသညျကို select ပါလျှင် ခ်ိတ္ဆက္ပါ, သင် Exchange server ကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်အဟောင်းမှမဟုတ်ပါ OST ဖိုင်။ သငျသညျအဟောင်း၌ဒေတာကိုရယူချင်လျှင် OST Outlook နှင့် s ကိုပိတ်နိုင်သည်tarထပ်မံ t အော့ဖ်လိုင်း mode ကို.
ထို့ကြောင့်မတူညီသောရွေးချယ်မှုများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်အဟောင်းကိုရယူနိုင်သည် OST ဖိုင်ဆာဗာသိုမဟုတ်ဖိုင်တွဲအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
In Exchange Recovery Mode, သင်လုပ်နိုင်သည် အဟောင်းကိုပြောင်းလဲ OST တစ် PST ဖိုင်သို့ဖိုင် Exchange data box အသစ်သို့၎င်း၏ data ကိုပြောင်းရွှေ့ရန်။
နောက်ပိုင်းတွင်အဟောင်းနှင့်အတူဆက်စပ်ဟောင်း Exchange စာတိုက်ပုံး OST ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်နောက်တဖန်ရရှိနိုင်ပါသည် ခ်ိတ္ဆက္ပါမင်းထွက်မယ် Exchange Recovery Mode အလိုအလျှောက်။
သို့သော်စာတိုက်ပုံးကိုအမြဲတမ်းမရရှိနိုင်လျှင်သို့မဟုတ်၎င်းသည်အဟောင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါက OST ကြောင့်ဖိုင်ကို OST အကျင့်ပျက်ခြစားမှု file, ထို့နောက်မှထွက်ဖို့ဘယ်လို Exchange Recovery Mode နှင့် Outlook ကိုပုံမှန်အားဖြင့်နောက်တဖန်အလုပ်လုပ်စေ? အောက်ကအဖြေပါ။
Exit Exchange Recovery Mode နှင့်ပုံမှန်ပြန်အလုပ်လုပ်ခြင်း
အကယ်၍ Exchange mailbox သည်အမြဲတမ်းမရရှိနိုင်လျှင်သို့မဟုတ်၎င်းသည်အဟောင်းနှင့်မကိုက်ညီပါက OST ဖိုင်ယိုယွင်းမှုကြောင့်ဖိုင်ကိုဖျက်ရန်အောက်ပါအတိုင်း ကျေးဇူးပြု၍ လုပ်ပါ Exchange Recovery Mode နှင့် Outlook ကိုပုံမှန်ပုံမှန်ပြန်အလုပ်လုပ်ကြကုန်အံ့:
Microsoft Outlook နှင့်အဟောင်းကိုသုံးနိုင်သောအခြား application များကိုပိတ်ပါ OST ဖိုင်။
အဟောင်းကိုရှာပါ OST ဖိုင်။ သင်ကသုံးနိုငျ ရှာရန် ရှာဖွေရန် Windows တွင်အလုပ်လုပ်သည် OST ဖိုင်။ ဒါမှမဟုတ်ရှာဖွေပါ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောတည်နေရာများ ဖိုင်အတွက်။
အော့ဖ်လိုင်းဒေတာအဟောင်းကိုကယ်တင်ပါ OST ဖိုင်။ အဟောင်း OST သင့်အတွက်အရေးကြီးသောဖိုင်ဟောင်းအဟောင်း၌မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်အော့ဖ်လိုင်းအချက်အလက်ပါ ၀ င်သည်။ ဤအချက်အလက်များကိုကယ်တင်ရန်သင်လုပ်ရမည် အသုံး DataNumen Exchange Recovery အဟောင်းကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန် OST ၎င်းဖိုင်ထဲရှိဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူပြီး Outlook PST ဖိုင်ထဲသို့သိမ်းဆည်းပါ Outlook ရှိစာများနှင့်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုလွယ်ကူစွာနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ရယူနိုင်သည်။
အဟောင်းကို Backup လုပ်ပါ OST ဖိုင်။ လုံခြုံရေးအတွက်၊ သင်ပိုကောင်းအောင်သိမ်းထားပါ။
Cached Exchange Mode ကိုပိတ်ပါ။5.1 S ကtarOutlook ။
၅.၂ Tools များ မီနူး, ကလစ် အီးမေးလ်အကောင့်များ, ကလစ် ရှိပြီးသားအီးမေးလ်အကောင့်များကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်း, ကိုနှိပ်ပါ နောက်တစ်ခု.
၅.၃ Outlook သည်ဤအကောင့်များအတွက် e-mail ကိုအောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်သည် စာရင်းပြုစုပါ၊ Exchange Server အီးမေးလ်အကောင့်ကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးနောက်ကိုနှိပ်ပါ ပွောငျးလဲ.
၅.၄ လက်အောက်တွင် Microsoft Exchange Serverရှင်းလင်းရန်ကိုနှိပ်ပါ Cached Exchange Mode ကိုသုံးပါ သေတ္တာစစ်ဆေးပါ။
၅.၅ Outit Outlook ။
အဟောင်းကိုအမည်ပြောင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ် OST ဖိုင်။
Cached Exchange Mode ကိုဖွင့်ပါ။7.1 S ကtarOutlook ။
၅.၄ လက်အောက်တွင် Microsoft Exchange Serverဖွင့်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ Cached Exchange Mode ကိုသုံးပါ သေတ္တာစစ်ဆေးပါ။
အသစ်တစ်ခုကိုပြန်လည်တည်ဆောက် OST ဖိုင်မှတ်တမ်း။ restarOutlook နှင့် Outlook ရှိ Exchange စာတိုက်ပုံးအကောင့်သစ်အတွက်ဆက်တင်များသည်မှန်ကန်မှုရှိစေရန်နှင့် Outlook သည်သင်၏ Exchange Server ကိုအောင်မြင်စွာဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်၏ Outlook Outlook ဖိုင်တွဲဖိုင်အသစ်ကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးနိုင်ပြီးလဲလှယ်ရေးစာတိုက်ပုံးနှင့်၎င်းအချက်အလက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်စေမည့်သက်ဆိုင်ရာ Exchange mailbox တွင်သင်၏အီးမေးလ်များကိုပေးပို့ / လက်ခံပါ။ အောက်ပါအတိုင်း၎င်းကိုပယ်ဖျက်ပြီးအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရမည် -
8.7 မမှန်ကန်သော profile များကိုဖယ်ရှားပြီးသည်အထိ 8.6 ကိုထပ်မံလုပ်ပါ။
၈.၂ ကိုနှိပ်ပါ ပေါင်း ပရိုဖိုင်းအသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့် Exchange ဆာဗာပေါ်ရှိ၎င်းတို့၏ချိန်ညှိချက်များအရအီးမေးလ်အကောင့်များထည့်ရန်။
8.9 S ကtart Outlook နှင့်သင်၏ Exchange mailbox ကိုထပ်တူပြုပါကသင်ထွက်သွားလိမ့်မည် Exchange Recovery Mode.
အဆင့် ၃ တွင်ပြန်လည်ရယူထားသောအချက်အလက်များကိုတင်သွင်းပါ။ သင်ထွက်ပြီးနောက် Exchange Recovery Modeသစ်ကိုစောင့်ရှောက် OST Exchange mailbox အတွက်ဖိုင်ဖွင့်ပါ၊ ပြီးနောက် Outlook ဖြင့်အဆင့် ၃ တွင်ထုတ်လုပ်ထားသော PST ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ။ ၎င်းတွင်သင့်အဟောင်းတွင်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာအားလုံးပါ ၀ င်သောကြောင့် OST ဖိုင်အသစ်, သင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုသင်၏အသစ်သို့ကူးယူနိုင် OST လိုအပ်သကဲ့သို့ဖိုင်။